China CNC agbanye ụlọ ọrụ na-emepụta | Ebute ụzọ
CNC ịtụgharị amị akụkụ site “mbịne” mkpanaka ihe na udia a ọnwụ ngwá ọrụ n'ime mbịne ihe. On a lathe ihe a ga-ebipụ rotates mgbe a cutter na-nri n'ime n'usoro workpiece. Enwere ike inye cutter ahụ n'ọtụtụ akụkụ ma nwee ike iji ọtụtụ ụdị ngwá ọrụ.
Ntinye ihe na -emepụta ihe niile 360 ​​gburugburu na-akwụsị arụmọrụ, na-enyere nri nri akpaka, nri akpaka, ịkpụcha akpaka, ọrụ nnyefe akpaka.
2.Uji KASRY Nesting sistemụ mmemme dị ka ngwa ọrụ mmemme kachasị mkpa, ngwanrọ mmemme ngwanrọ AUTOCAD nke bụ isi, nke dị mfe, eserese na nke kensinammuo, njirimara-ọgaranya, ọ nwere ike meziwanye arụmọrụ arụmọrụ.
3.High-end na-arụ ọrụ mgbanwe robotic na-agbanwe agbanwe akụkụ atọ, iji nweta ọrụ bevel, ọkpọkọ na ọwa na-eji ọrụ ntinye ọrụ.
Nwere ike belata carbon steel, igwe anaghị agba nchara, ọla kọpa, aluminom na ọkpọkọ ndị ọzọ na profaịlụ, dị ka: ọkpọkọ ahụ, ọkpọkọ, ọkpọkọ oval, akụkụ anọ nwere akụkụ, H-beam, I-beam, angle, channel, wdg. na ụdị ụdị ọkpọkọ profaịlụ ọkpọkọ dị iche iche, ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri, usoro ntanetị, nchara, injin mmiri, pipeline mmanụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
CNC Turning bu uzo di omimi na uzo zuru ezu iji meputa ihe ndi ozo na ihe ndi ozo site na iji lathe. Computer Numerical Control (CNC) ịtụgharị bụ a ukwuu ọkà, nkenke Engineering usoro.
Olee akụkụ mkpa CNC agbanye?
O doro anya na CNC Milling na CNC Turning bụ usoro dị iche iche nke ga-ejedebe n'ọtụtụ okwu na nsonaazụ dị iche iche. Centlọ ọrụ CNC dị mma maka mpịakọta dị mkpụmkpụ na karịsịa prototypes na akụkụ ndị dị n'okpuru 2.5 "ebe etiti ntụgharị nwere ike ịrụ ọrụ n'akụkụ ndị karịrị 2.5" OD, ọ ga-adị mkpa ka enyocha ha n'otu n'otu ma dabere na olu nke akụkụ ndị a na-emepụta, ọ nwere ike inwe mmetụta dị elu na ọnụahịa nke mmepụta. Ọzọkwa, ọ bụrụ na akụkụ ahụ erughị 1.25 ”OD, ntụgharị nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ maka ịmịpụta akụkụ ahụ. Otú ọ dị, ọ dị mkpa iburu n'obi na ihe kachasị mkpa na-ekpebi ma ọ bụrụ na mpempe akwụkwọ ahụ nwere ike ịmepụta site na CNC Turning bụ olu. Olu dị elu nke na-erughị adaba akụkụ ahụ kwesịrị ka a rụpụta ya site na ntụgharị.
Okuma Ejima Spindle Lathes
Mazak otu spindle ngwa ntụgharị CNC lathe
Ndidi: Roundness na concentricity ziri ezi nwere ike ruru +/- 0.005mm
Enwere ike iru ihu ala ruo Ra0.4
Ogo dị iche iche: dayameta nke akụrụngwa gbara gburugburu site na 1mm ruo 300m
Ihe: Aluminom, ígwè, igwe anaghị agba nchara, Titanium, ọla, wdg
A nabatara OEM / ODM
Ọrụ ndị ọzọ:CNC igwe, CNC agbanye, Ogwe igwe, Mpempe akwụkwọ metal, Emecha, Akụrụngwa,, wdg
Nke gara aga: CNC igwe
Osote: Akụkụ Brass